October 2019 - Boga Wise Man
Jamaal su’aalo badan ayaa kusoo dhacay maskaxdiisa. Inkastoo oo aanu saaxiibkii ku aqoon nin haasaawaha dumarka ku dheereeya balse waxa uu ku yaqaanay nin wax kasta tayada ka raaca. Tusaale ahaan markay noqoto dhinaca dhegaysiga heesaha, xulashada buugaagta, xulashada filimaanta iyo maqaaxiyaha cuntada wanaagsanba Jamaal waxa uu ahaa mid Naasir u daba fadhiista. Koley inkastoo […]
Siduu Rasuulku calayhi salaatu wa salaam inoo sheegay, wadnuhu waa xubinta keliya ee haday hagaagto noloshu kuu hagaagayso, haday xumaatana aad halis ku sugantahay. Wadnuhu waa xarunta iimaanka iyo diinta. Sidoo kale waa xarunta jacaylka iyo nacaybka. Wadnaha fikirka xun iyo camalka xumiba way kharibaan. Sidoo kale wadnuhu wuu kasoo kaban karaa dhibta iyo dhaawaca […]
Waa Maxay Qorshaheenu?
Waa Maxay Qorshaheenu? Dhibaatooyinka aynu weli xalin kari la’nahay sida qabyaalada, qaadka, aqoon darrada bulshada iyo daryeel cafimaad la’aantu waa dhibaatooyinkii ilaa 1960-meeyadii ina haystay. Qorshaheena horumarku waa kii siyaasiyiintu inoo soo bandhigeen muddo imika ku dhaw afartan sano ka hor. Hadaan si kooban u qeexo siyaasadaas waxay ahayd inaynu noqono wadan madaxbanaan, kadibna shirkadaha […]